မြို့ထဲမှာ ငလျင်အကြီးကြီးလှုပ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? - BOSAI | NHK WORLD-JAPAN On Demand
မြို့ထဲမှာ ငလျင်အကြီးကြီးလှုပ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ထုတ်လွှင့်သည့်ရက် နိုဝင်ဘာလ 3, 2021 ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မည့် နောက်ဆုံးရက် နိုဝင်ဘာလ 3, 2022
မြို့ပေါ် မှာ အပြင်သွားရင်းလာရင်း ငလျင်အကြီးကြီး လှုပ်တာနဲ့ကြုံမယ်ဆိုရင် မိမိကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားထားတာ ရှိပါသလား။ အမေရိကန်နိုင်ငံဖွား Bobby ဟာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ လေ့လာသင်ယူရေးဌာန "SONA AREA TOKYO" ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မြို့ကြီးတစ်မြို့ကို တိုက်ရိုက်ဗဟိုပြုပြီး မဂ္ဂနိကျု ၇.၃ ပြင်းအားရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်တဲ့ အခါ ငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီး ၇၂ နာရီ အတွင်း မှာအသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက် သိထားဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေကို သူနဲ့အတူ လေ့လာသင်ယူကြပါမယ်။ (၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီ လေ့လာသင်ယူရေး စင်တာထဲမှာ ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတိုင်း တကယ့် အရွယ်အစား မြင်ကွင်း တိုက်တာအိမ်ယာတွေ ပြိုကျနေပုံ၊ အသံတွေ၊ အလင်းရောင်တွေနဲ့အတူ မီးလောင်ကျွမ်းနေပုံတွေနဲ့ လှိုင်း တွေကို ဖန်တီးထားပါတယ်။ လေ့လာသူတွေဟာ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေစဉ်အတွင်း ဘေးလွတ်ရာကို ဘယ်လို တိမ်းရှောင်ရမယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ခံစားကြည့်ပြီး အတွေ့အကြုံယူ ရင်း သင်ကြားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
"တိုကျိုငလျင် ၇၂ နာရီခရီး" မှာတိုကျိုမှာ ငလျင်လှုပ်ရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာသိနေအောင် ပါဝင်လေ့လာသူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေအလိုက် သက်ဆိုင်ရာပဟေဋ္ဌိတွေကို ဖြေကြားတဲ့ tablet ကို အသုံးပြုပြီး ဘေးလွတ်ရာဧရိယာကို တိမ်းရှောင်ကြရပါတယ်။
SONA AREA TOKYO က လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Sawa Yoshihiro (ယာ) ကရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ကြီးတွေမှာ ငလျင်ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ခတ်တဲ့အချိန် မှာအလုပ်ခွင်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်ဆိုရင် အလုပ်ထဲမှာပဲ သုံးရက်နေဖို့ ဝန်ထမ်းတွေကို ညွှန်ကြားထားပါတယ်။